प्रधानमन्त्रीकै कारणले देश कोरोनाको खाडलमा फस्दै छ : गगन थापा [ अन्तर्वार्ता ] - Media Dabali
प्रधानमन्त्रीकै कारणले देश कोरोनाको खाडलमा फस्दै छ : गगन थापा [ अन्तर्वार्ता ]
संसद्‌मा होस् या पार्टीमै पनि कडा प्रतिपक्षीको रुपमा उत्रिने नेता हुन् गगनकुमार थापा । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद थापा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण होम-आइसोलेसनमा छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको एउटा पनि केस नहुँदैदेखि सरकारलाई तयारी गर्नुपर्छ । कुनै दिन नेपालमा आइहाल्छ भनेर झकझकाइ रहने थापाको कुरा झण्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले सुनेन । थापाको मात्रै होइन अन्य कसैको पनि सुझाव सरकारले सुनेन ।
त्यसको परिणामस्वरुप अहिले देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण करिब नियन्त्रण बाहिर जस्तै छ । अझै पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ ? कसको कारणले यस्तो अवस्था आायो ? कांग्रेसमा पनि महाधिवेशन लागेको छ । आइसोलेसनबाटै कसरी पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई नियाली रहनु भएको छ भनेर थापासँग मिडिया डबलीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
तपाईं कोरोना भाइरस संक्रमित हुनभयो । पछि तपाईंका परिवारका सदस्यलाई पनि संक्रमण देखियो । कसरी सतर्कता अपनाइरहनु भएको छ ?
सबै संक्रमितहरु एकअर्कासँग भेट हुन मिल्ने भइहाल्यो । मेरो एउटा छोरीलाई चाहीँ अलग्गै राखेका छौं । उसलाई कोरोना पोजेटिभ छैन । बुबाआमा सबैको हेरविचार गर्ने, दिनमा तीन चारपटक अक्सिजन नाप्‍ने, ज्वोरो नाप्‍ने रेकर्ड राख्‍ने, कुनै समस्या भइहाल्छ कि भनेर खास ध्यान त्यसमा दिइरहेको छु ।
सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि काम किन नगरेको भनेर प्रश्‍न गर्ने र काम यसरी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिइरहने तपाईं आज आफैँ संक्रमित हुनुहुन्छ । तपाईंले दिएका सल्लाह सुझावहरु सरकारले किन टेरेन ?
यस केही कारण छन् । अहिले स्वास्थ्यको मात्रै अवस्था होइन । नियमित अवस्था त छन् हुँदै होइन । यस्तो लडाईंको मुख्य नेतृत्व हाम्रो प्रधानसेनापति भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्री हो । यो लडाईंमा हाम्रो दुरावस्था हुनुमा प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार पन नै मुख्य हो । कुनै पनि लडाईं जित्‍नका लागि रणनीति हुनुपर्छ । उक्त रणनीति अनुसार योजना बन्‍नुपर्छ, योजना अनुसार सबैलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग न रणनीति, योजना थियो न अहिले छ । न यो लडाईंमा सबैलाई जुध्‍न तयार पार्न सक्नु भयो । यसको बारेमा उहाँको बुझाई नै गलत छ सुरु देखि नै । अहिले पनि । सिंगो सरकार सुरुदेखि अहिलेसम्म अलमलिएको छ ।
मैले भनेको मात्रै होइन । विज्ञ, अन्य राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजले भनेको कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सुझाव हुन् भनेर लिनु भएन, हेर्दै हेर्नु भएन । सुझावप्रति सधैं वक्रदृष्टि लगाउनु भयो सुझाव दिँदा पनि आलोचना गरेको ठान्नु भयो ।
कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानै लाग्यो भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरुले भनिरहेका छन् । तत्काल कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पो केही छन् कि ?
अहिले नै पनि हेर्दाखेरी आजको मात्रै होइन कम्तिमा पनि एक महिनासम्म के हुन्छ भनेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर हेर्नुपर्‍यो । यो सरकारले फागुनमा चैतको हेरेन, चैतमा वैशाखको हेरेन । अहिले पनि यो क्रम जारी नै छ । एक महिनासम्मको लागि हेरियो भने पूर्व तयारीको लागि समय पनि पुग्छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । आजलाई व्यवस्थापन गर्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्‍ने रणनीति तयार पार्नुपर्छ । विभिन्‍न ठाउँमा अहिलेकै जसरी कोरोना फैलिरहे भोलि के होला भनेर एकपटक त छलफल गर्न पर्‍यो । यहाँ त भन्यो भने उल्टै नकरात्मक सोच्ने परिपाटी भयो ।
समस्याको समाधान खोज्दा खण्डखण्डमा होइन । कहिले आइसोलेनको कुरा गर्छौं, कहिले अस्पतालको, कहिले के । सिटमा के हो । सिस्टम कस्तो बनाउने भनेर हामीले छलफल नै गरेनौं । सिस्टमको माध्यमबाट सरकारले हेरेको भएजस्तै कोठाभाडामा बस्‍ने मान्छेलाई संक्रमित भएपछि कहाँ लैजाने, आइसोलेसनमा बसेको मान्छेलाई अक्सिजन कम भयो भने के गर्ने केही सिस्टम छैन भद्रगोल छ । अहिले यतिबेला सोच्‍ने भनेको त धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई संक्रमण मुक्त गरेर अस्पताल खाली गराउने हो नि त । अस्पतालमा कम मान्छे लैजान के गर्नुपर्छ होला, नगरपालिकाले के गर्ने, वडाले के गर्ने, केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्‍ने त आउनुपर्या नी । अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालय के गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने हो, यो पटक्कै सरकारले सोचन ।
कोरोनाकै कारणले थलिएका स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्रलाई उकास्न अहिले देखि नै केही गर्न सकिँदैन ?
यो कोरोनाको कारणले परेको प्रभाव स्वास्थ्यसँगै अरु ठूलो क्षेत्रमा छ । पाँच महिना लकडाउन गर्दा सरकारले केही तयारी गरेन । सरकारले राहत दिन सकेन । थलिएका क्षेत्रलाई पुन: उकास्‍न कुनै कार्यक्रम ल्याएन । त्यसको परिणाम के आयो भने मान्छेहरु सरकारले भनेको कुनै पनि निर्णयहरु नमान्‍ने अवस्थामा पुगे । चाडबाडको बेला छ । मानिसहरु यो बेलामा बढी सक्रिय हुने अवस्था छ । यस्तो बेलामा अन्य देशले अपनाएको शैली हामीले पनि अपनाउन सकिन्छ । खानै नपाएकाहरुलाई पैसा नै ट्रान्सफर गरेर भएपनि भोको नराख्ने त गर्न पर्‍या नि ।
हाम्रा साना र मझौला व्यापारका क्षेत्रलाई तंग्राउन राहतको प्याकेज ल्याउन सके भोली अर्थतन्त्रको चक्र घुम्छ । कोरोना भन्दा पहिले रोजगारीमा रहेका लाखौं मान्छे बेरोजगार भए ति मान्छेहरुलाई रोजगारीमा टिक्नसक्ने गरी मद्दत त सरकारले गर्न पर्‍यो ।
अन्तमा आइसोलेनमा रहँदा पार्टीको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? महाधिवेशनमा तपाइँलाई कुन उम्मेद्वारको रुपमा देख्न सकिन्छ ?
महाधिवेशन ढिलोछिटो भइ नै हाल्छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको थियो । त्यसले धेरै कुराहरु मत्थर पार्ने अनुमान थियो । तर, मलगायत केही साथीहरुलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो बैठक सरेको छ । अर्को कुरा महाधिवेशनमा के उठ्ने भन्ने कुरा सबै नेता कार्यकर्तासँग छलफल, सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्दै बन्‍ने योजना अनुसार तय हुन्छ ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कोरोना रोक्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई दिए १६ बुँदे ‘आइडिया’
विश्व किर्तिमान गरेका मिङ्ग्मा शेर्पा सहितको टोलि कांग्रेसमा प्रवेश, डा. कोइरालाले गरे स्वागत
बालुवाटारमा तमसा भन्दै गगनले दिए नेकपालाई दनक, चौतर्फी हंगामा !
गगनको गर्जन : लाखौं कांग्रेसीको मन जित्न नसके सभापतिले राजिनामा दिनुपर्छ
शनिवार, श्रावण १० २०७७०६:३९:३१